Azony ny Fandehanana ho Eny An’Habakabaka Saingy Tsy Afaka Mivezivezy Malalaka Ety An-tany Izy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Avrily 2017 6:44 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Ελληνικά, Français, 日本語, Português, عربي, हिन्दी, Türkçe, українська, English
Mpikatroka ny fahasalamana ara-tsaina Britanika Miozolomana Hussain Manawer nahazo ny fandehanana amin'ny sambondanitra ara-barotra. Hihodikodina eny amin'ny habakabaka ambonin'ny planeta izy amin'ny herintaona. Kanefa sakanan'ny mpitandro ny filaminana hatrany isaky ny handray sidina iraisampirenena . Sary: Hussain Manawer
Niseho voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 23 Martsa 2017 ity tantara avy amin'i Andrea Crossan ity. Ary navoaka eto indray izany ho anisan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny Global Voices sy ny PRI.
Mihevitra i Hussain Manawer fa ratsy vintana izy noho ny fanakanana azy matetika. Nametraha-panontaniana tao amin'ny seranam-piaramanidina avy any Los Angeles ho any Makedonia izy ary nivazivazy fa tsy hisy hanakana intsony satria efa mahafantatra azy ny rehetra ankehitriny.
“Miezaka fotsiny aho mba ahafantarako ny fomba tsara indrindra handravana ny fanilikilihana filazana fa mpampihorohoro avokoa ny olona Miozolomana rehetra,” hoy izy.
Taranaka Pakistaney i Manawer, tao Essex, Angletera izy no lehibe. Ary nisarika ny saina maro izy taorian'ny nanoratany tononkalo sy nahazoany fisidinana ho eny amin'ny habakabaka, rehefa nilaza izy nandritra ny kabary nataony tao Thailandy hoe: ” Hussain Manawer no anarako, ary tsy mpampihorohoro aho.” Nilaza i Manawer fa nilaza izany izy ho valin ‘ny tranga fanavakavaham-bolokoditra maro izay efa niainany.
“Niala aho,” hoy izy, rehefa nanontaniana raha nitadidy ny fotoana rehetra izay nisamborana sy nametraham-panontaniana azy. “Tena tsy rariny ny habetsaky ny fotoana nanakanana ahy.”
Nokarakarain'ny Kruger Cowne’s Rising Star ny fifaninanana hahazoana ny fisidinana eny amin'ny habakabaka ho an'ny tanora 18 ka hatramin'ny 30 taona. Mpandray anjara miisa telo alina avy amin'ny firenena mihoatra ny 90 no nifaninana ho an'ny toerana iray ao amin'ny sambon-danitra ara-barotra XCOR Aerospace Lynx, izay hisidina amin'ny taona 2018.
Ilay tononkalo mitondra ny lohateny hoe “Hussain no anarako” no nahazo ny fandresena. Sombin-tononkalo maharitra telo-minitra izy io ary manomboka toy ny taratasy milaza famonoan-tena avy amin'ny ankizilahy iray ho an-dreniny, nefa fantatra taty aoriana fa ny Natiora no reny tiana ambara tamin'izany .
Indro i Manawer nanatontosa izany teo anoloan'ny mpitsara sy ireo mpijery nanatrika :
“Izany no zavatra ataoko, poety aho. Manoratra tononkalo aho ho fanatsarana ny fiainan'olombelona, ​​ho fianarana ara-tsosialy sy ara-pihetsehampo. Tao no nahazo toerana ny habakabaka . Naniry ny handray anjara tamin'ny fifaninanana aho mba handraisana ny asako ho zava-dehibe kokoa “, hoy i Manawer.
Manasongadina ny fampisehoana lahateny sy lahatsary mahatsikaiky ny Fantsona YouTube-ny , Hussain's House (ny fonenan'ny Hussain). Kanefa mifantoka hatrany amin'ny fahasalamana ara-tsaina, sy ny fanilikilihana manodidina azy izany .
Nanao lahateny ho fanentanana momba ilay foto-kevitra i Manawer, 26 taona rehefa nandresy tamin'ny fifaninanana. Lasa liana momba ny olana izy rehefa nisy namana iray tratran'ny hakiviana lalina, kanefa nahatsapa tsy nahazo aina loatra izy hanambara izany tamin'ny fianakaviany. Miresaka tsy tapaka mikasika ny fahasalamana ara-tsaina i Manawer ankehitriny ary manantena fa hanome azy fahafahana bebe kokoa mba handinika izany tsara ny diany ho eny amin'ny habakabaka .
“Tena liana aho momba ny fahasalamana ara-tsaina. Mino aho fa ao anatin'ny tontolo tsara tarehy izay mitombo isan'andro sy isan-taona isika, na izany aza, mieritreritra aho fa sady mifandray no tapaka fifandraisana amin'ny fotoana iray ihany koa isika . Ary ny tiako holazaina amin'izany dia hoe mora kokoa ny mifandray amin'ny olona manerana izao tontolo izao noho ny mifandray amin'ny olona ao anaty efitrano. “
Nilaza i Manawer fa tsy mbola nanonofy ny handeha eny amin'ny habakabaka mihitsy izy, ary mbola tsy fantany raha tena natokana ho azy tokoa ny fandehanana ho eny amin'ny habakabaka raha velom-pankasitrahana noho izany fahafahana izany izy .
“Fantatrao ve? Tsy tena te ho any aho raha hilaza ny tena marina … kanefa mazava ho azy fa hiroso miaraka amin'izany aho . “